Best Plastic Camera umbhobho sentsimbi yoMvelisi kunye Factory | EWenyue
Elungiselelweyo umbhobho steel imveliso eziluncedo:
1. Lungisa iimeko ezingcwatyelweyo nezifumileyo, kwaye ungamelana namaqondo obushushu aphezulu naphantsi kakhulu.
2.Strong anti-uphazamiseko, ukuba umbhobho wentsimbi wawutyabeka ngeplastiki kusetyenziswa njengebhasi yentambo, inokuthi ikhusele ukuphazamiseka komqondiso wangaphandle.
3.Umandla woxinzelelo olungileyo, uxinzelelo oluphezulu lunokufikelela kwi-6Mpa.
4. Ukusebenza kokufakwa kakuhle, njengetyhubhu yokukhusela iingcingo, ukuvuza akunakuze kwenzeke.
5. Akukho burr, udonga lombhobho ogudileyo, olungele ukunxiba iingcingo okanye iintambo ngexesha lokwakha.
Ukucaciswa, iintlobo, kunye neendlela zonxibelelwano zemibhobho yentsimbi egalelwe iplastiki yeentambo iye yahluka. Phakathi kwazo, ukucaciswa okuncinci kunokuveliswa ukuya kuthi ga kwi-15mm, kwaye akukho sithintelo kukhulu. Iindidi zayo zafakwa ngaphandle, iplastikhi yangaphakathi ngaphakathi nangaphandle, njl., Kwaye luhlobo oluchanekileyo olunokusetyenziswa nakwezinye iinkalo. Indlela yoqhagamshelo isebenzisa i-welding, groove, flange kunye ne-wire buckle connection, kwaye i-welding inokumisela i-bimetal okanye i-welding engonakalisi.
Egqithileyo Isitya sensimbi